Putin oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in uu xiriir la yeeshay Flyn - BBC News Somali
Putin oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in uu xiriir la yeeshay Flyn
Flynn iyo Putin oo is ag fadhiya ayaa hadda ka hor la sawiray
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu wax aan badnayn la hadlay madaxii hore ee ammaanka Maraykanka Michael Flynn markii ay isku arkeen kulan casho oo Mosko ka dhacay 2015kii.
Sawir wakhtigaas laga qaaday ayaa sii huriyay warar la isla dhexmaray oo ku saabsan in ay macquul tahay in xiriir uu dhexmaray maamulka madaxweyne Donald Trump iyo aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin.
Laakiin Putun ayaa warbaaahinta NBC u sheegay in Flynn wuxuu yahay loo sheeegay markii cashada lagu kala tagay ka dib.
Flynn ayaa shaqada laga eryay bishii labaad ee sannadkan ka dib markii uu Aqalka Cad ee Maraykanka u sheegay warar uu ku marin habaabiyay oo ku saabsan xiriirkii uu la sameeyay safiirkii Ruushka u fadhiyay dalka Maraykanka.
Flynn ayaa muujiyay in uu xaq u leeyahay in uu daaha ka rogo xogta uu hayo isaga oo ku dhawaaqay in uu ka soo hor muuqan doono Guddiga Arrimaha Mukhaabaraadka u qaabilsan Aqalka Senetka Maraykanka si uu ugala hadlo warka ku saabsan eedaymaha sheegaya in Ruushku uu faragaliyay doorashadii madaxtinimada ee dalka Maraykanka.
Micahel Flynn oo diiday inuu macluumaad la wadaago guddi baaraya
Madaxweyne Trump ayaa diiday in ay wax wadashaqayn ah dhex martay isaga iyo Ruushka, isaga oo baaritaanka ay hadda ku hayso laanta dambi baarista Maraykanka ee FBI ku tilmaamay "quraafaad" isaga ka dhan ah.